Imigomo elandelwayo eNingizimu Afrika yesehlukaniso ilula kakhulu.Lombhalo uveza yonkinto ofisa ukuyazi.
Imishado ongene nayona yonkinto ebiza igamalakho,umshado ohleliwe kanye nomshado wenkolelo osuke ulawulwa abaqeqeshelwe lowomsebenzi wokushadisa lezozehlukaniso kufanele zikhulunywe enkantolo.Isehlukaniso siqala ngokuthi umnikeze amaphepha obushade naye ashoyo ukuthi ucela isehlukaniso futhi udingeka enkantolo.Lokhu kufanele kuhanjiswe umsebenzi wasenkantolo ayokunikeza lowo ekucelwa kuye isehlukaniso.
Kunezinhlobo ezimbili zesehlukaniso:
Ilowo enikwazi ukusebenzisana kuwo nalowo ebenishade naye kanye nalowo othatha iminyaka ukuze kuphume isinqumo sokugcina umuntu ophuma nesinqumo imantshi yenkantolo.
Enikwazi ukusebenzisana kuyo
Isehlukaniso enikwazi ukusebenzisana kuso nalowo obushade naye niphume nesinqumo noma isivumelwano esisodwa.Ummeli lowo ongakhethi cala lamuntu uyekanye ekuxhunywana naye nixoxisane naye.Akulona icala eliqanda ikhanda lidinge bobabili abantu kudingeka lowo owafaka isicelo sesehlukaniso enkantolo.
Bobabili laba abebekade beshadile bayavumelana ukuthi izinto zabo zizohlukaniswa kanjani ngaphambi kokuba sivunyelwe isehlukaniso sabo,uma kukhona izingane ukuthi zizohlala nobani futhi kubonwane kanjani.
Incwadi ekhuluma ngokuhlala(okufaka ukuthi bazoba abazali kanjani uma izingane zikhona,ekhishwe emahhovisi basekhaya) ibese iyabhalwa nangosizo lo mmeli bese beyasayina bobabili laba abebeshadile ukuvumelana ngazozonke izinqumo ezithathiwe.Bese ibekwa njengecala lasenkantolo.
Lendlela yesehlukaniso yiyo engabizi kakhulu futhi iyashesha ukuth sikhishwe isinqumo.kuyenzeka zithathe izinyanga ezine4 njee kuphela.
Imantshi ithatha isinqumo
Lenhlobo yesehlukaniso uma ingene enkantolo njengecala,iyayithatha iminyaka emibili noma emithathu.
Lenhlobo yesehlukaniso ihlanganisa lokhu okulandelayo:
2.Ukufaka isicelo sokufuna usuku ekuzokhulunywa ngalo lelicala
3.Amaphepha amasha avelayo
4.Ukuvela kwi mantshi ngecala lenu
5.Usuku lwecala lenu
Izincwadi ezihlelwe kahle Amaphepha ahlelwe kahle kwisehlukaniso zibizwa ngokuthi izicelo zento ethize.Lokhu kungafaka incwadi eshoyo ukuthi uzovela lapho obizwe khona,ileyonto efakelwe isicelo sayo,ukwazisa ukuthi umuntu uyaziphikela noma uyazilwela noma uyazikhulumela loyo ekucelwa kuye isehlukaniso,isicelo kanye nezinto ezishiwo ilowo ofake isicelo sesihlukaniso
-Ukufika lapho obizwe khona:Isehlukaniso siqala ngalolusuku okuyilona lona enibizwe ngalo enkantolo.Uma lomuntu ofakelwe isehlukaniso(yena kanye loyo ofakelwe isehlukaniso okungayena osicelile othola incwadi yokubizwa suku thizeni)uma efuna ukuzizwela aphinde aphikise izinto ezishiwo ilowo ofuna isehlukaniso,Kufanele afake incwadi yokuthi uzoza noma uzovela njengokubizwa kwakhe ezinsukwini eziyi shumi(10) zingakapheli(Uma behlala endaweni eyodwa)noma izinsuku ezingamashumi amabili nanye (21) uma behlala ezindaweni ezihlukene futhi eziqhelelene.
-Isicelo:Uma usufake isicelo sokuzilwela,lowo ofakelwa isehlukaniso kufanele alethe isicelo ezinsukwini ezingamashumi amabili (20) zenkantolo.Kuleyoncwadi yesicelo lowo ofakelwa isehlukaniso kufanele avume noma aphike noma akhulume wonke amaqiniso noma azibe yonkinto eshiwo ngaye njengoba efakelwa isehlukaniso.Uma ehluleka ukuletha lencwadi yesicelo bazomthathela izinqumo futhi atholakale njengomuntu okuyena yena ongenzanga kahle.
-Ukuphikisana nokushiwo umfaki sicelo sesehlukaniso:Loyo ofakelwa isehlukaniso angafaka incwadi ephikisana nokushiwo ilowo ofuna isehlukaniso.Lokhu kungalandelwa ukufakwa isicelo sezicelo ilowo ofaka isehlukaniso.
Ukufakwa kwesicelo sosuku elizothethwa ngalo enkantolo
Lowo ofaka isicelo sesehlukaniso uyahamba ayofuna usuku ekuzothethwa ngalo icala labo lolosuku ulunikwa iloyo owaziyo ukuthi enkantolo kwenzekani ngasuku luphi.Uma lokhu kungenziwanga ngezinsuku ezibekiwe uma izicelo sezivaliwe,loyo ofakelwa isehlukaniso angakwenza lokho
Ngalesikhathi kufakwa izicelo nangalesikhathi kulindwe usuku ekuzokhulunywa ngalo icala lesehlukaniso,kunento ebizwa ngokuthi okuvelayo.Ilapho umuntu nomuntu efuna kuvezwe izinto ezizosetshenziswa ngosuku lokuthetha icala lesehlukaniso.Lokhu kungafaka amaphepha asebhange,amaphepha okuba ingxenye kwizinkampani thizeni,amaphepha akhombisa ukuthi imali bebeyisebenzisa kanjani,izinto abazikhokhelayo ezithatha iminyaka kanye nentela.
Ukuvela ngaphambi kosuku olubekiwe ngaphambi kokuthi kuthethwe icala
Inkantolo ingakwenza lokho kwenziwe ngaphambi komsebenzi osebenza enkantolo ngaphakathi enkantolo kodwa emahhovisi kuphela,ukuze ezobona okuphikisayo okulethiwe.
Ngosuku lokuthethwa kwecala kwesehlukaniso kwenziwa kukhona bobabili abafuna isehlukaniso kanye naba mmeli babo benikezwa ithuba lokuthi bakhulume konke okusabala,okuyilapho inkantolo yaziswa okuyikona okuyizinkinga futhi nalokho enivumelana ngakho.
Ukuthethwa kwecala lesehlukaniso kufanele lithethwe ngaphambi kwemantshi.
*Ezinye izinhlobo zezehlukaniso eNingizimu Afrika*
Lesisehlukaniso ilapho ekuthathwa khona isinqumo uma lowo ofakelwe isehlukaniso engezanga ukuthi kuzothethwa icala lesehlukaniso kuthathwa isinqumo engekho.
Isehlukaniso ozenzela sona
Lesisehlukaniso ilesi ozenzela wena ngaphandle kosizo lommeli futhi awabizi kanti futhi alula.
Kungenziwa ngezindlela ezimbili:
-Inkantolo esendaweni yiyo eninikeza amaphepha kanye nemiyalelo ukuthi niyenza kanjani nizimele.
-Kukhona nemibhalo eyalanayo etholakala komakhalekhukhwini uyayibheka uyithole yonke ikuyalelele ukuthi ukwenza kanjani konke kuze kudlule lezozinsuku.
Lenhlobo isebenza kalula uma:
-Kungekho ophikisayo okushiwo
-Kungekho ekufanele kuhlukaniswe macala womabili kungaba izimali nokunye
-Akukho ukuphikisana makuziwa ezinganeni
Ekungeneleleni,loyo ozimele wesithathu uzosebenzisana nalababantu bobabili ukuzama ukuthi kufikwe esiphethweni.Uma isivumelwano sesibhaliwe ngosizo lwalomuntu wesithathu,labantu bobabili abafuna isehlukaniso sebengaxhuma nabammeli babo ukuthi bayibukisise.
Ukungenelela kuyenzeka uma:
-Bobabili abantu bevumelana ngokuthi bazosebenzisana kahle
-Kunemali ekuvunyelwana ngayo
-Ukungaboni ngasolinye kufanele kusheshe kulungiswe makwenzeka
Zonke izinhlobo zesehlukaniso zingakwazi ukuthi zingeneleleke,kusuka ekuhlukaniseki izinto kuya ekunakekeleni izingane.Bobabili abantu bangavuma ukuthi kungenelelwe kungakenzeki noma sesenzekile isehlukaniso.
Izinhlangano ezihlanganelwa ematafuleni
Kulenhlobo yesehlukaniso ilapho ekuhlangenyelwa khona ezindaweni ekuvunyelwana kuzo abammeli bobabili bakhulume bengekho enkantolo bakhulume ngezimali zalabo ababamele ukuthi zimi kanjani.Uma bevumelana kuyaba sebebhala incwadi bevumelana,bese lowo ofake isicelo sesehlukaniso ahambe ayovela enkantolo ayolanda okungokwakhe,nenkantolo isisivumile isivumelwano.
Izingxoxo zivame ukuthi zibizwe ngezinhlangano ezihlanganyelwa ematafuleni,futhi lezinhlangano akushiwo ukuthi zike zenzeka uma kwenzekile kwayiwa enkantolo.
Isehlukaniso ekusetshenziswana kuso
Umthetho kulenhlobo yesehlukaniso,umuntu nomuntu uza no mmeli wakhe ngalesikhathi kwenziwa izingxoxo ukuzoseka futhi balulekwe ngakwezemithetho baphinde babhekane bayibambe iqine kulesigaba.Lezinhlobo zesehlukaniso azikenziwa eNingizimu Afrika.